महराको डे’टिङ र बाँस्कोटाको सेटिङ का’ण्ड केहो ? – Bannigadhi Today
महराको डे’टिङ र बाँस्कोटाको सेटिङ का’ण्ड केहो ?
धनराज साउँद २०७६ फागुन १०, शनिबार १३:५५
खाइहालेको होइन क्यारे, खान खोजेको मात्रै हो । बोलेको कुरा फिर्ता लिएर सफाइ दिए नि हुन्छ । चोरेको कुरा फिर्ता गर्छु भन्दा त मुक्ति पाउने नजिर बसेको देशमा जाबो मुखले बार्गेनिङ गरेको त हो, म अब त्यस्तो गर्दिनँ भन्दा किन मुक्ति नपाउने रु काण्ड, काण्ड भनेर हेप्ने ? उज्यालाेबाट साभार
क्याटेगोरी : फरक संसार, राष्ट्रिय, रोचक, समाचार, समाज